लकडाउन : जोखिम मानिसका लस्करलाई सहयोग, बाईकमा खाद्यान्न बोक्नेलाई कारबाही | Boli Dainik
लकडाउन : जोखिम मानिसका लस्करलाई सहयोग, बाईकमा खाद्यान्न बोक्नेलाई कारबाही
वैशाख ३ – सरकारले जो जहाँ छ त्यही बस्ने गरि लकडाउन लागु गरेको भएपनी जनप्रतिनिधी देखी सामाजिक संघसंस्था सम्मले हिँडडुललाई बढावा दिईरहेका छन् ।
दिनहुँ फरक स्थान बाट फरक स्थान सम्म जाने व्यक्तिहरुलाई खाटोमा खाना खुवाउने, यातायातका साधन व्यवस्था गर्नेलगाएतका कार्यहरु जनप्रतिनिधी र सामाजिक संघसंस्थाकै अगुवाईमा भईरहेका छन् । विभिन्न संघसंस्थाहरु राजमार्गका विभिन्न स्थानमा क्याम्प लगाएरै कसले कती धेरै जनालाई खाना खुवाउने भनेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । कोरोना भाईरसको संक्रमण कम गर्न सरकारले लागु गरेको लकडाउनमा मानिसको आवतजावत रोक्नुपर्नेमा यातायात रोकलाई मात्र प्राथमिकता दिएको गुनासो बढेको छ ।
रिब्दीकोट गाउँपालिकाका ओम खाम्चाले घरमा राशन सकिएर टाढाको बजारबाट बोकेर ल्याउन गाह्रो भएको भन्दै एक्लले चाहिने जति सामान किनेर घर फर्कँदा प्रहरीले कारबाही गर्ने गरेको बताउनुभयो । “मानिस चाही १०/२० जना बाटोमा खुलेआम हिड़दा नी केही नभन्ने, बाइृकमा खाद्यान्न ओसार्दा कारबाही भोग्नु पर्ने ? यो कस्तो लोजिक हो ?” खाम्चाले भन्नुभयो । “कोरोना त गाड़ी भन्दा मानिसबाट बढ़ी संक्रमण हुने होईंन र ? त्यो गाड़ीको के दोष ।”
कोरोना भाईरसको संक्रमण मानिसबाट अत्यन्तै छिटो सर्ने भएपनी मानिसको हिँडडुललाई खुला छाडेको र यातायातको साधनलाई मात्र रोक लगाएको गुनासो नागरिकले गरेका छन् । तानसेन खाद्यान्न पसल खोल्न जाँदै गरेका एक व्यक्तिले आवश्यक काम परेर हिँड्दा सोधपुछ नगरि गलत व्यवहार गरेको बताउनुभयो ।
“प्रहरीले यातायातका साधन मात्र बन्द हो जस्तो गर्ने रहेछन् ।” उहाँले भन्नुभयो । “प्रहरीले तँ सम्बोधन गर्दै गलत व्यवहार गरे, बाईक छोडेर हिँड्दै जा, हिँड्दै आईज भने । भाईरस सर्ने त मानिसबाट पो हो त, बाईकबाट हो त ?” प्रहरीले बाटोमा दिनहुँ मानिसहरु खुल्लमखुल्ला हिँड्दा केही नभन्ने तर आवश्यक काम परेर बाईकमा हिँड्दा गलत व्यवहार गर्ने गुनासो गर्नुभयो ।
कोरोना संक्रमण जोखिम कम गर्न सरकारले लागु गरेको लकडाउन कुनै राजनैतिक पार्टीले गरेको नेपाल बन्द जस्तो भएको नागरिकले गुनासो गरेका छन् । हिँडडुल गर्न पाईने तर सवारी चलाउँदा मात्र कारबाही भोग्नु पर्ने जिल्ला प्रहरीको तथ्यांकले पनी थप पुष्टी गर्छ । जिल्ला प्रहरी कार्याललयले अहिले सम्म २ सय ३५ सवारीलाई लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरीले दिनहुँ लकडाउनको अवज्ञा गर्ने सवारीलाई पक्रेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ तर लकडाउन अवज्ञा गर्ने एक जना पनी व्यक्ति अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन । यसको अर्थ सवारीमा रोक, व्यक्तिलाई छुट दिएको देखिने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।